Home > Travel Europe > Europe ga-ahụ ebe ofufe
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 24/04/2020)
Europe bụ n'ụlọ ka otu n'usoro nke omenala akụkọ ihe mere eme na breathtaking ije, ọtụtụ nke na-weghaara site na Afrika nke ukwu collection of ebe ofufe. Ọ bụ ya mere taa, anyị na-na mechie elu 3 na anyị na-atụle ịbụ zuru kwesịrị-na-ahụ, ekpuchi ụwa a ma ama ụlọ gafee ụfọdụ nke Europe kasị ama obodo.
1. St Peter nnukwu ụlọ ụka Senti, Vatican City
Emi odude n'ime mgbidi nke ụwa kasị nta mba, Vatican City, St Peter nnukwu ụlọ ụka Senti bụ ịrụ ụka adịghị otu n'ime mmepeanya kasị ukwuu feats nke ije na art. ugbu a a isi mma ịbịaru 10 nde ọbịa a afọ, a pụtara Ọdịdị ihu St Pita Square na-anya isi ihe opulent Nchikota nke mere ihe akụkọ art, marble ogidi na ihe iconic Mozis-agbakọta dome mere site Michelangelo (nke ị nwere ike ịrị elu nke, i kwesịrị amaja na-na 491 emee n'ụzọ!).
Ọ bụ ezie na nke a bụ ihe dị otú a na-ewu ewu ntụpọ n'etiti ndị njem nleta, e ka a na nlezianya uwe koodu manyere na ị kwesịrị maara nke n'ihu na-eleta. Ị ga na-eyi ogologo traụza (pụtara dịghị nịịka, n'agbanyeghị otú o na-ekpo ọkụ na Italian anyanwụ bụ), na inyom kwere ka na-eyi uwe mwụda ogologo karịa ikpere ogologo. N'ubu ga-kpuchie site niile nwoke mgbe niile.
St Peter nnukwu ụlọ ụka Senti bụ na-emeghe kwa ụbọchị site na 7 am-7pm na April na September na 7 am-6pm si October ka March. Entry bụ free (ọ bụ ezie na e nwere ndị mbanye ụgwọ maka ticketed ngalaba, dị ka St Pita atụnye na St Pita Dome), Otú ọ dị, -maara na queues nwere ike ịbụ ogologo, n'ihi na ọdụ ụgbọ-style scanners na nche i nwere gabiga mbụ.
2. Sultan Ahmed alakụba (The Blue alakụba), Istanbul
Dị na Turkey dị transcontinental obodo, Istanbul, Sultan Ahmed alakụba na--ezo dị ka The Blue alakụba n'ihi na nke ya pụrụ iche-acha anụnụ anụnụ n'ime ime. Wuru site Ottoman ọchịchị Ahmed m n'etiti 1609 na 1616, a nnukwu Ọdịdị-eme dị ka ma a isi njegharị mma na ifịk ebe ofufe, pụtara ụlọ alakụba na-emechi na-abụghị ndị na-efe n'oge ise kwa ụbọchị ekpere – na-ekpe ekpere ugboro nwere ike ịbụ enyocha ebe a tupu ị gara.
E nwere a siri ike uwe koodu na niile ọbịa ga-rube isi tupu ha abanye na ụlọ alakụba. Firstly, akpụkpọ ụkwụ ga-ewepụ ma na enịm ke doro anya plastic akpa nyere site na ụlọ alakụba n'efu – ị ahụ nwere nhọrọ na-ahapụ gị akpụkpọ ụkwụ na a cubby oghere ma ọ bụ na-ebu akpa na ị. Mgbe ọ na-abịa gị uwe, mmadụ na-ahọrọ rụrụ uwe ma hụ na ha ụkwụ na-ekpuchi, na-ezere ihe ndị dị otú ahụ dị ka akwa nchekwa na nịịka. Women kwesịkwara iyiri rụrụ-ekwesị uwe, mgbe huu ha na ogwe aka, ụkwụ, na ntutu isi na-ekpuchi na niile ihe. Nke a pụtara na ndị inyom na-atụ anya na-eyi a headscarf mgbe n'ime na, dị ka nke a nwere ike a echiche ọhụrụ n'ihi na ọtụtụ ndị na-abụghị Muslim Western ọbịa, anyị nwere ike ikwu na-amụta otú n'ụzọ ziri ezi na-eyi obi umeala a uwe dị oké mkpa tupu ị na-eme njem.
Entry bụ free (ọ bụ ezie na a onyinye nta na-eme ka izugbe bụkwanụ nke ụlọ a na-ume n'elu ụzọ ọpụpụ) na, ugboro n'ime, foto na flash na-kwere, pụtara na ị na-free na-ọtụtụ nke snaps nke ụlọ alakụba na-adọrọ mmasị n'ime ime. ndammana, ọ bụghị na-ekwuru, na, dị ka Sultan Ahmed alakụba bụ ka ifịk ebe ofufe, Jide n'aka na-anọgide na-jụụ, na-akwanyere ya ùgwù nke ma ndị ụlọ na ihe ọ bụla na-efe mgbe gị nleta.
3. The Sagrada Familia nnukwu ụlọ ụka Senti, Barcelona
La Sagrada Familia nnukwu ụlọ ụka Senti aghọwo ihe iconic Spanish ịrịba ama, n'agbanyeghị eziokwu na ụlọ bụ ka na-ewu – ọ bụ ezie na ọrụ malitere na 1882, ọ ugbu a gaghị atụ anya ga-agwụ agwụ ruo mgbe 2026! Otú o sina dị, a ọkara zuru Roman Catholic chọọchị bụ ugbua ihe ụkpụrụ ụlọ masterpiece, na-eme ka ọ na-apụghị ịgbagha agbagha kwesịrị-ahụ mma maka ọbịa si gafee n'ụwa.
Open ka na-aga chọọchị na ndị ọbịa kemgbe narị afọ nke 19, The Sagrada Familia nnukwu ụlọ ụka Senti ị enweta 4.5 nde ọbịa kwa afọ na-arụ ọrụ ugbu a ticketed entry usoro dị ka a N'ihi – ndị a bụ ndị dị ịzụta online ruo ọnwa abụọ tupu ụbọchị gị nleta. Ndị a tiketi na-arụ ọrụ na ofu entry ugboro ka a n'aka mbenata njubiga ókè nke mmadụ, Otú ọ dị, ozugbo ị na-na na n'ime ị na-free na-eji dị ka ogologo dị ka ị ga-amasị-ekiri nnukwu ime. Anyị na-akwado ikwe ọ dịkarịa ala 2 awa kwesịrị iri na a ụkpụrụ ụlọ ijuanya. Maka ọbịa na-achọ ịga a na chọọchị ọrụ, uka na-ẹkenịmde ke 9am ọ bụla Sunday na 8pm ọ bụla Saturday, na-adịgide adịgide 1 hour na-eduziri ọtụtụ asụsụ.
La Sagrada Familia nnukwu ụlọ ụka Senti eze implements ọkọlọtọ eyi akwa Roman Catholic ụka, Otú ọ dị, nke a adịghị agbasaghị na-dị ka nditịm manyere dị ka ọ bụ na Sultan Ahmed alakụba ma ọ bụ St Peter nnukwu ụlọ ụka Senti. Nke a na-kwuru na, ọ bụ ka anyị nkwanye-eso nke a uwe koodu mgbe ọ bụla o kwere omume, pụtara na ị ga-ewepụ ọ bụla headwear n'elu ntinye, eyi kwesịrị ekwesị elu ahụ uwe na-ekpuchi gị n'ubu, azụ, na midriff na wear legwear na mkpuchite n'okpuru apata ụkwụ.
Europe bụ n'ụlọ ka ọtụtụ mma ebe ofufe nke n'ezie encapsulate na unrivaled ike nke ije na okpukpe n'ike mmụọ nsọ. Ịhụ ndị a tụrụ mbụ aka, njem Afrika ụgbọ okporo ígwè na akwụkwọ na Save A Train to leave no stone upturned across Europe’s many sights and attractions.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “3 Europe kwesịrị-Lee ebe ofufe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-places-worship%2F የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị na peeji nke na njikọ n'elu ma ọ bụ jiri embed.ly njikọ.
Na ndị na-esonụ njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, a njikọ bụ maka English ụzọ gasị ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe tr ka Fr ma ọ bụ de na ndị ọzọ na-asụ asụsụ nke gị nhọrọ.
I am a content creator and a proud Islamic woman for my free time I write content and my job is to make abayas, hijabs and a range of modest Islamic clothing for women. - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m